Shina tontolo iainana maharary maharitra maharitra volavolan-tany any an-tokotany fanamboarana sy orinasa | Volotsangana Volamena
Ny vokatra REBO volotsangana dia vita amin'ny kofehin'ny volotsangana voajanahary, amin'ny alàlan'ny fizotran-tsolika 2700 taonina sy gazy karbonika, izay mahatonga ny tabilao ho mateza sy mafy ary matanjaka. Manjary malaza eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny famaritana volotsangana. Ny velaran-tany dia mombamomba ny onja kely misy lamosina miorina na mivadika.
Ny volotsangana ivelany dia volotsangana voarindra. Ny akora ho an'ny gorodona volotsangana mavesatra any ivelany dia ny volon'osy moso azo havaozina, izay tena sariaka amin'ny tontolo iainana. Ny gorodona volotsangana mavesatra any ivelany matetika dia raisina amin'ny hafanana avo sy ny fanerena avo. Noho izany, ny hakitroky ny gorodona vita amin'ny volotsangana any ivelany dia avo lavitra noho ny an'ny gorodona volotsangana tsotra sy ny gorodona hazo.
Ny faharetana dia iray amin'ny tanjon'ny REBO, mahatonga ny REBO Bamboo decking ho zava-misy.
Betsaka ny anton-javatra izay isan'ny olona mihabetsaka misafidy vokatra vita amin'ny volonondry vita amin'ny kofehy ho an'ny trano sy ny haingon-trano. Ny tena mampiavaka ny gorodona volotsangana ivelany dia toy ny fehin-kibo:
1) Tsy misy ady, tsy misy triatra, fanoherana.
2) Ny rano mahatohitra, ny takelaka volotsangana REBO dia voasedra amin'ny toetry ny rano ary tanterahina ny kilasy 4, izay mety amin'ny any ivelany, mifandraika amin'ny tany sy rano madio.
3) Tsy misy bobongolo, tsy misy bibikely.
4) Manohitra ny toetr'andro tafahoatra sy ny toetrandro samihafa
5) Harena ara-tontolo iainana, mitsitsy ny ala.
Ny vokatra REBO volotsangana dia vita amin'ny kofehin'ny volotsangana voajanahary, amin'ny alàlan'ny fizotran-tsolika 2700 taonina sy gazy karbonika, izay mahatonga ny tabilao ho mateza sy mafy ary matanjaka. Manjary malaza eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny famaritana volotsangana. Ny velaran-tany dia mombamomba ny onja kely misy lamosina miorina na mivadika. Ny halavan'ny fenitra dia 1860mm, ny sakany mahazatra dia140mm, ny hatevin'ny is18mm. Mazava ho azy, ny hateviny dia mety ho 20mm ary maro hafa. Miankina amin'ny fangatahan'ny mpanjifa izany.
Teo aloha: E1 Eurpean fenitra eco-friendly Flooring any ivelany
Manaraka: Tabilao fametahana volotsangana E1 mahazatra